Waqtiga Tareenka ee Hawada 'YHT' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWaqtiga Tareenka ee Hawada 'YHT'
13 / 12 / 2019 06 Ankara, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
guncel yht times train
Waqtiga Tareenka ee Hada ee 'YHT'; Tareeno xawaare sare leh, kuwaas oo si weyn ugu fududeeya nolosheena gaadiidka is-dhexgalka, ayaa sii wada isku xidhka magaalooyinka kala duwan, rakaabka iyo dhaqamada. Tareeno xawaare sare leh oo u adeega magaalooyin kala duwan oo leh astaamo safar oo kala duwan iyo noocyo wagon ayaa loo diyaariyey si weyn oo leh astaamo farsamo sare. Gaadiidka TCDD (YHT) ee arimahan oo dhan hal-abuurnimada iyo horumarka tikniyoolajiyada sida ugu dhakhsaha badan ee loogu daro nidaamka ayaa ku siinaysa fursad safar aan la dafiri karin.
Tareeno xawaare sare leh, oo kuu oggolaanaya inaad magaalada aado waqti gaaban marka loo eego gaadhiga oo aad u safarto dhaqaale ahaan, ayaa loo qaybiyaa saddex qaybood: pulman, ganacsi iyo casho. Nidaamka tigidhada safarka ee TCDD ka dib marka aad doorato jadwalkaaga waxaad dooran kartaa gaariga aad rabto inaad safarto. Maaddaama uusan jirin rakaab rakaab oo loogu talagalay gaariga raashinka, tikidhadan looma iibinayo baabuurkan. Qeybtaan waad cuni kartaa waxaadna ka iibsan kartaa cuntada karsan.
Tareenka Xawaaraha Sare - YHT
Iskuxiryada Baska YHT
Tareen xawaare sare leh ayaa laga soo qaatay Bursa, Antalya, Karaman by TCDD Gaadiidka loogu talagalay gaadiid sahlan khadadka YHT ee magaalooyinka qaarkood. Iskuxiryada xarunta kuugu dhow ayaa la heli karaa si ay heshiis uga gaadhaan sidatan oo ay uga soo baxaan tareenka muuqda magaalooyinkaas. Xiriirimahaan:
Isku xirka Xawaaraha Tareenka Sare ee Karaman Konya
Antalya Konya Xiriirka Tareenka Xawaaraha Sare
Isku xirka Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Bursa Eskişehir
Tareenada xawaaraha sare waxay kaloo ka faa'iideysan karaan qiimo kala duwan. Isku-darkaasi wuu kala duwan yahay 20% iyo 50%.
Dadka iibsanaya tikidhada wareega ah ee ka baxsan isla xilliga iyo saldhigyada soo-galayaasha waxay heli karaan qiimaha 20 ee tigidhada xawaaraha sare leh.
Dadka da'doodu u dhaxayso 13 iyo 26 waxay helayaan qiime dhimis 20 sababtoo ah waxay ku xiran yihiin dhimista dhalinyarada.
Macallimiinta ka socda Wasaaradda waxbarashadu waxay xaq u leeyihiin qiimo dhimis 20 iyadoo aan loo eegin inay yihiin iskuullo gaar loo leeyahay ama kuwo dowladeed. Sicir-dhimistaas waxaa ka mid ah maamulayaasha iyo kaaliyaha agaasimeyaasha, aqoonyahannada jaamacadda iyo kulliyadaha, iyo macallimiinta dhalashada Turkiga ee ka shaqeeya waddamada shisheeye.
20 qiimo dhimis ayaa sidoo kale laga codsadaa saraakiisha millatariga NATO iyo khabiiro ka shaqeeya ciidamada qalabka sida ee Turkiga.
Kooxaha 12 ama 12 ee iibsashada tikidhada wadajirka ah waxay xaq u leeyihiin sicirka 20.
Rakaabka u dhexeeya da'da 60 iyo da'da 65 waxay xaq u leeyihiin qiime dhimis ah 20.
Rakaabka ka weyn da'da 65 waxay xaq u leeyihiin sicirka 50.
Xubnaha saxda ah ee gudaha ama kuwa ajnabiga ah ayaa sidoo kale xaq u leh 20 qiimo dhimis leh kaararka ay bixisay Agaasimaha Guud ee Macluumaadka Daabacaadda.
Shaqaalaha TCDD iyo qoysaskooda (xaaska iyo caruurta) waxay ku xiran yihiin sicirka 20.
Carruurta da'doodu ka yar tahay 7-12 waxay helayaan sicir-dhimista 50% e Carruurta da'doodu ka yar tahay da'da 7 ma bixiso haddii aanay ku safrin kursi gaar ah.
Waxaan hoos ku soo diyaarinay tareennada xawaaraha-xawaaraha sare loogu talagalay ee loogu talagalay kuna dardargalinaya muwaadiniinta in ay gaaraan magaalooyinka ay si dhakhso leh u tegi doonaan iyo astaamaha astaamaha qaarkood. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad wici kartaa Gaadiidka TCDD ama waxaad bilaabi kartaa inaad ku raaxaysato socdaalkan raaxo leh ee mudnaanta leh adiga oo iibsanaya tikitkaaga isla markiiba qiimaha ugu dhaqaale badan bogga tikidhada tikidhada internetka.
Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) Waqtiga Safarka
16 Laga soo bilaabo bishii Luulyo 2019;
Maalin kasta laga bilaabo Bilecik ilaa Istanbul, 08.09-11.49-14.44-19.09,
Maalin kasta laga bilaabo Bilecik ilaa Konya, 09.59- 15.18- 21.14,
Maalin kasta laga bilaabo Bilecik ilaa Ankara 09.11-11.39-15.54-17.56-19.42-20.18
waxay u dhaqmi doontaa qaab.
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Izmir Antalya
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara Istanbul, Ankara Dammaanadda 6 Shaqeeyaan. Tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Istanbul ee ka tagaya Ankara wuxuu ku joogsanayaa Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit iyo Gebze, siday u kala horreeyaan. 4 saacadood 15 daqiiqo gudahood. Ankara-Istanbul Tareenka xawaaraha sare ku socda kuma istaago joogsiga qaar waqtiyada qaar ee imaatinka tareenka waxaa dhici kara kala duwanaansho.
HALKAN HALKAN MACLUUMAAD DHEERAAD AH ANKARA ISTANBUL YHT
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara ee Istanbul, Ankara-Ankara iyo Ankara-Istanbul Dammaanadda 6 Shaqeeyaan. Tareenka ayaa ka ambabaxay Istanbul Pendik kuna aaday Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir, Polatli iyo Sincan siday u kala horreeyaan Ankara 4 saacadood 15 daqiiqo gudahood. Maadaama tareenka xawaaraha dheer ee Istanbul-Ankara uusan joogsanayn meelaha qaar, waxaa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin waqtiga imaatinka tareenka.
Bandhigyada Gaarka ah ee Istanbul Ankara YHT
ISTANBUL ANKARA MACLUUMAAD DHEERAAD AH MACLUUMAAD KU SAABSAN YHT
Dugsiga Sare ee Ankara Eskişehir
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara Eskişehir Eskişehir waa mid ka mid ah istaagida khadka tareenka Ankara. Waa suurtagal in lagu sameeyo safarada 5 safkan. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira khadka Ankara Eskişehir. Dammaanadda 6Khadadka Tareenka Sare ee Ankara Eskişehir waa mid ka mid ah 11 maalin kasta. Maaddaama waqtigan uu yahay mid ku-meel-gaadh ah, ma jiro wil weel cunto ah oo ku dhex jira. Maadaama saldhigyada tareenadu ay ku yaalliin magaalada, waad ku dhex safri kartaa inta u dhaxeysa Ankara iyo Eskişehir. saacadood 1,5 horumarka. Halkii aad ku safri lahayd tareen, waxaad sidoo kale dooran kartaa khadka Anlara Istanbul. Laba ayaa gudbaya isla joogsiga.
HALKAN HALKAN MACLUUMAAD DHEERAAD AH ANKARA ESKİŞEHİR YHT
Tareenka Xawaaraha Sare ee Eskişehir Ankara waa mid ka mid istaagida Wadada Eskişehir İstanbul Ankara. Waa suurtagal in lagu sameeyo safarada 5 safkan. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira khadka Eskişehir Ankara. Dammaanadda 6Qadka Tareenka Sare ee Eskişehir Ankara wuxuu ka mid yahay 11 maalin kasta. Maaddaama waqtigan uu yahay mid ku-meel-gaadh ah, ma jiro wil weel cunto ah oo ku dhex jira. Maaddaama saldhigyada tareenadu ay ku sugan yihiin magaalada, markan waxay siisaa rakaabka wax ku ool ah. Celcelis Journey saacadood 1,5 Waxaa socda.
Ankara Eskisehir YHT Bixinta Gaarka ah
ESKİŞEHİR ANKARA Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan YHT
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara Konya Dammaanadda 7 Shaqeeyaan. Celceliska muddada duulimaadyadan waa 1 saacadood 55 daqiiqo Waxaa socda. Sincan iyo Polatli ayaa joogsanaya. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo tigidhada ah, kuwan waa kuwa jaangooyooyin ah oo dabacsan. Mid ka mid ah tareennada xawaaraha-xawaaraha sare leh ee nooca xNUMX gaari waa nooca heerka xaraashka '2 + 2'leyleyleyda fasalka fasalada ganacsiga' 2 + 2 '. Waqtigani waa mid gaagaaban, sidaa daraadeed ma jiro gaari gaagaaban oo cunto leh.
Halkan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ANKARA KONYA YHT
Tareenka Xawaaraha Sare ee Konya-Ankara Dammaanadda 7 Shaqeeyaan. Celceliska muddada duulimaadyadan waa 1 saacadood 55 daqiiqo Waxaa socda. Polatlı iyo Sincan ayaa joogsanaya. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo tigidhada ah, kuwan waa kuwa jaangooyooyin ah oo dabacsan. Mid ka mid ah tareennada xawaaraha-xawaaraha sare leh ee nooca xNUMX gaari waa nooca heerka xaraashka '2 + 2'leyleyleyda fasalka fasalada ganacsiga' 2 + 2 '. Waqtigani waa mid gaagaaban, sidaa daraadeed ma jiro gaari gaagaaban oo cunto leh.
Bixinta Gaarka ah ee Ankara Konya YHT
HALKAN MACLUUMAAD DHEERAAD AH OO KU SAABSAN KONYA ANKARA YHT
Tareenka Tareenka Sare ee Konya- Istanbul Dammaanadda 2 Waxaa ka warqaba. Jidka ugu dambeeya ee tareenka waa Istanbul Pendik. Waqtiga celceliska 4 saacadood 20 daqiiqo Waxaa socda. Jidadka tareenka Konya-Istanbul ayaa u kala horreeya Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit iyo Gebze. Waad iibsan kartaa duullimaadyo leh laba ikhtiyaar oo tikidhada caadiga ah oo dabacsan iyo noocyo kala duwan oo nooca xNUMX ah. Tareenka waxaa ku jira dhaqaalaha pulman, ganacsiga pulman, gaari-gacmeedka ganacsiga pulman oo ay la socdaan raashin.
HALKAN HALKAN MACLUUMAAD DHEERAAD AH KONYA KONYA ISTANBUL YHT
Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul Konya maalin kasta Dammaanadda 2 Waxaa ka warqaba. Jidka ugu dambeeya ee tareenka waa Konya. Celceliska muddada socdaalka tareenka 4 saacadood 20 daqiiqosidoo kale dhameystir. Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul-Konya wuxuu maraa Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir saldhigyada siday u kala horreeyaan. Waad iibsan kartaa duullimaadyo leh laba ikhtiyaar oo tikidhada caadiga ah oo dabacsan iyo noocyo kala duwan oo nooca xNUMX ah. Tareenka waxaa ka mid ah dhaqaalaha pulman, ganacsiga pulman, gaari-gacmeedka ganacsiga pulman oo ay la socdaan raashin. Qiimaha tikidhada tareenka waxay ku kala duwan yihiin noocyada gaariga.
Bandhigyada Gaarka ah ee Istanbul Konya YHT
ISTANBUL KONYA YHT HALKAN MACLUUMAAD DHEERAAD AH
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad wici kartaa Gaadiidka TCDD (444 8 233) ama bogga iibsiga tigidhada khadka tooska ah, waxaad bilaabi kartaa inaad ku raaxaysato socdaalkan raaxada iyo mudnaanta leh adoo tikitkaaga isla markiiba ku iibsanaya qiimaha ugu dhaqaalaha badan.
Xaqiijinta YHT ee dardargelinta taariikhda 08.12.2019 Riix halkan
Loogu Talagalay Xilliga Tareenka Yeelanayo ee YTTT iyo Iskuxirka Baska Tan iyo 08.12.2019 Riix halkan
Si aad u hesho tikidhada kubadda cagta ee kubadda cagta Riix halkan
Jadwalka Tababarida Xawaaraha Sare Highly 2019
Wararka Hada Socda
TCDD Khariidada Tareenada
Gaadiidka dadweynaha hadda ee Istanbul
Qiimaha Tikidhada Bariga Express ee hadda
Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara ilaa Konya
Ankara - Istanbul YHT Train Saacadaha ayaa lagu dhawaaqay
2019 Qiimaha Tikidhada Sare
Qiimaha Tikidhada 2019 Tareenka Sare
Qiimaha Tikidka ee 2019
2019 Jadwalka Tareenka Xawaaraha Sare
Saacadaha Xawaaraha Sare ee Socda
Jadwalka Tareenka Sare ee Socda
qiimaha tikidhada tareenka
TCDD YHT Waqtiga
Ku Saabsan Boli Mountain Tunnel
Injineerka Marvels Taariikhda Varda Bridge